Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » Ọdọ Mmiri Powell na -emebi: Ọ dị nwute maka njem!
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Mgbanwe ihu igwe ka ghọrọ eziokwu na nnukwu okwu maka ụlọ ọrụ njem na Lake Powell, otu n'ime mpaghara ama ama na Arizona na Utah, USA.
Mgbanwe ihu igwe adịla adị na Arizona na Utah ebe ọdọ mmiri Powell nọ na nsogbu
N'Ọdọ Mmiri Powell, ahịrị mmiri ahụ agbadala na akụkọ ihe mere eme, na -emebi nnukwu ụlọ ọrụ mpaghara
Ọdọ Mmiri Powell bụ ọdọ mmiri mmadụ mere na Osimiri Colorado na Utah na Arizona, United States. Ọ bụ ebe ezumike nke ihe dị ka nde mmadụ abụọ na -eleta kwa afọ.
Nke a ka bụ ọkwa na Njem nlegharị anya nke Lake Powell website:
Obi dị anyị ụtọ ịnabata ndị ọbịa na Lake Powell ma anyị na -atụ anya ọbịbịa gị. Biko chọta ozi emelitere gbasara mgbanwe na arụmọrụ na ọrụ anyị n'oge a ka anyị na-emepe.
Ahụike na nchekwa nke ndị ọbịa, ndị ọrụ, ndị ọrụ afọ ofufo, na ndị mmekọ na Lake Powell bụ ihe mbụ anyị. Ụlọ Ọrụ National Park Service (NPS) na-arụkọ ọrụ ọnụ na gọọmentị etiti, steeti, na ndị ọchịchị ime obodo iji hụ na nchekwa nke ndị ọbịa anyị ma soro ntuziaka ahụike kacha emelitere.
Ọnọdụ ihu igwe na -adịwanye ọkụ ma kpọọ nkụ, ihe egwu ọkụ na -abawanye kwa ụbọchị. Ndị ọbịa kwesịrị ịkpachapụ anya na -emegharịgharị n'ala ọha mgbe ihe egwu ọkụ na -abawanye.
Ihe mgbochi ọkụ bụ n'ihi mmụba ọkụ na-arịwanye elu yana mkpa igbochi ọkụ na-akpata mmadụ n'oge ọnọdụ ọkụ nwere ike dị ize ndụ, ịkwalite ahụike na nchekwa ọha, yana ichekwa akụ. Onye na -agbanyụ ọkụ na nchekwa ọha ka bụ ihe kacha mkpa n'oge ọkụ ọgbụgba.
Iji mụtakwuo maka mgbochi ọkụ na ala ọha ndị ọzọ na Arizona na Utah, biko gaa www.wildlandfire.az.gov na www.utahfireinfo.gov. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ọkụ ọgbụgba n'ofe mba ahụ, gaa inciweb.nwcg.org.
Nke a bụ eziokwu:
Ọdọ Mmiri Powell dị na mgbago ugwu Arizona wee rute na ndịda Utah. Ọ bụ akụkụ nke Osimiri Colorado na Glen Canyon National Recreation Area. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku kilomita abụọ nke oke osimiri, anwụ na -adịghị agwụ agwụ, mmiri ọkụ, ihu igwe zuru oke, yana ụfọdụ ihe nkiri dị egwu na ọdịda anyanwụ, Ọdọ Powell bụ ebe egwuregwu kacha mma. Ịgbazite ụgbọ mmiri ụlọ, nọrọ n'ogige anyị, ma ọ bụ nwee ebe obibi anyị ma wụba n'ime njem nlegharị anya.
Ndị ọrụ National Park na -ekwupụta na mberede n'ọnwa a na ụgbọ mmiri enweghị ike iji Wahweap Launch Ramp, ebe a na -ebupute ụgbọ mmiri na mpaghara. A dọrọ ụgbọ mmiri ndị a tụbara n'ime mmiri aka na ntị na ha nwere ihe na -erughị otu izu ịlaghachi n'ala ma ọ bụ nwee ihe ize ndụ nke imebi ihe.
Obere obodo Page nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ 7,500 na enweghị ụgbọ mmiri, ụlọ ọrụ njem anaghị enwe ọtụtụ ihe nwere ike ime ka obere obodo a na -agba ọsọ na -agba ọsọ. Ọ bụ nsogbu maka obodo Page.
Ọ bụ ezie na mgbanwe ihu igwe emeela ka ọkụ ọgbụgba, ọkụ na ebili mmiri ka njọ n'oge ọkọchị a, ọ na -ebutekwa nnukwu ụlọ ọrụ njem na -adabere na Lake Powell. N'izu gara aga, ahịrị mmiri ahụ rutere na akụkọ ihe mere eme nke 3,554ft, ọkwa a na -ahụbeghị kemgbe 1969 mgbe mbụ mmiri jupụtara. Nnukwu ọdọ mmiri ugbu a bụ ụzọ atọ n'ime anọ efu, ọ ga-anọgide na-agbada ma ọ dịkarịa ala n'oge opupu ihe ubi na-esote n'ihi ịdekọ ọkwa obere akpa snow na efere mmiri Colorado.
N'ime mkpọsa ụgbọ mmiri ọha asaa nke dị na Lake Powell, naanị Bullfrog nke dị na ndịda Utah ka na -arụ ọrụ nke ọma n'ihi usoro mgbatị mgbago na nso nso a. Mana nke ahụ nwekwara ike bụrụ ihe a na -agaghị enweta ngwa ngwa.
Dabere na akụkọ dị na akwụkwọ akụkọ Guardian nke UK, Bureaulọ Ọrụ Mkpesa US na-ebu amụma na enwere ohere 79% Lake Powell ga-agbada 29ft ọzọ site na akụkọ ihe mere eme ugbu a “oge na-esote afọ”.
Dabere na akụkọ ọrụ National Park Service, Glen Canyon nwere ndị ọbịa nde 4.4 na 2019, na -eme ka ọ bụrụ otu n'ime ogige ntụrụndụ ndị a na -eleta na mba ahụ. Ndị ọbịa ahụ mefuru $ 427m na Page na mpaghara gbara ya gburugburu ma kwado ọrụ 5,243, gụnyere inye isi ọrụ dị mkpa maka Navajo Nation dị nso.
Enwere nnukwu ohere maka ohere ntụrụndụ ndị ọzọ n'akụkụ ọwa mmiri dị na Lake Powell.
Industrylọ ọrụ na -anya ụgbọ mmiri kwenyere na mpaghara ọmarịcha ọhụụ enwere na Glen Canyon bụ nnukwu ihe nkiri maka ndị njem.